Xilliga la fulinayo dilka rag loo heysto kiiskii Caasho Ilyaas oo la shaaciyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xilliga la fulinayo dilka rag loo heysto kiiskii Caasho Ilyaas oo la shaaciyey
Ardaan Yare 12 January 2020
Xeer ilaalinta Guud ee Dowlad Goboleedka Puntland Maxamuud Xassan Aw-Cismaan ayaa sirasmi ah u shaacisey waqtiga la xukunka dilka ahaa lagu fulin doono Saddex rag ah oo loo heysto kufsigii iyo dilkii loogu gyestay Gaalkacyo Gabar yar oo 12 jir hayed taa soo lagu Magacaabi jirey Caaisho Ilyaas Aadan.
Xeer ilaalinta Guud ee Dowlad Goboleedka Puntland waxaa uu sheegay in xukunka dilka ah eeraggaas la fulin doono 11/02/2020 marka ay saacaddu tahay 8:00 subaxnimo, goobta laga fulin doonana ay tahay fagaaro ku yaala Boosaaso.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa dhawaan wax laga weeydiiyey sababaha loo fulin la’yaay xukunka dilka ah ee Saddex ragga ah,waxaana uu sheegay in taasi ay go’aan ka gaari doonaan maxkamadaha Puntland.
Loolan u dhaxeeya Kheyre & Xasan Sheekh oo ka socda Dhuusamareeb
Trump oo kordhinaya qorsho ka dhan ah dalal Somalia ay kamid tahay